Umaki: ukuhlela | Martech Zone
Amaqembu wokumaketha kaningi kuneqembu elihlukile labakhangisi bangaphakathi, izinsizakusebenza ze-ejensi yangaphandle, kanye nabasebenza ngokuzimela okungenzeka basebenza emahhovisi emhlabeni wonke. Sibe nenqwaba yamapulatifomu asizile ngalokhu - kusuka kumadrayivu abiwe nge-inthanethi, amapulatifomu wenethiwekhi yokuxhumana nomphakathi, amakhalenda abiwe, nokuningi… futhi ngenkathi amathuluzi amaningi enokuhlanganiswa, cishe wonke amathuluzi weqembu lokumaketha abukeka njengesilo esikhulu UFrankenstein esikhundleni se
Sikhona sonke… isayithi lakho lidinga ukuvuselelwa. Kuphakathi kokuthi ibhizinisi lakho seliphinde laqanjwa kabusha, isayithi seliyindala futhi lidala, noma limane nje aliguquli izivakashi ngendlela olidinga ngayo nawe. Amaklayenti ethu eza kithi ukuzokwengeza ukuguqulwa futhi imvamisa kufanele sithathe isinyathelo sibuyele emuva futhi sithuthukise konke okukhona kubo bewebhu kusuka ekushintsheni uphawu kuya kokuqukethwe. Sikwenza kanjani lokhu? Iwebhusayithi ihlukaniswe yaba yisihluthulelo esingu-6
NgoLwesibili, ngoJulayi 26, i-2011 NgoLwesine, Novemba 22, 2012 UJenn Lisak Golding
Njenge-blogger yomuntu siqu neyobungcweti, nginenkinga yokukhipha iposi lebhulogi nsuku zonke ngenxa yomthwalo wami womsebenzi nezinye izingqinamba zesikhathi. Kepha uma ufuna ukuphumelela njenge-blogger, noma kungaba mathupha noma ngokomsebenzi, kufanele uhlanganise izinto ezintathu: ukufika ngesikhathi, ukuhambisana. Ukufaka zonke zalezi zinto, kubalulekile ukuthi ube nohlelo. Nawa amathiphu asheshayo ama-3 wokukusiza ukuthi ubhuloge kahle kakhulu: 1.
NgoMgqibelo, ngoMeyi 26, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Uma ungakaze ube nethuba lokubuka i-movie Hitch. I-movie ineminyaka embalwa, kepha isifaniso esihle sokumaketha. Ku-movie, u-Alex Hitchens (Will Smith), ufundisa abafana abangenalo ithuba lokuthola intombazane yamaphupho abo. Iseluleko asinikezayo ukuzama ukunciphisa amaphutha akho akhanyayo, unake usuku lwakho, futhi wenze nomsebenzi wakho wesikole. Isigcawu esingenakulibaleka yisigcawu esithandana ngokushesha lapho i